DIPLAOMATIKA : Nakotroka ny faha-45 taona nifandraisan’i Shina sy Madagasikara
Notontosaina afak’omaly tao amin’ny Tranombokin’nyAnjerimanontolo Ankatso afak’omaly ny lanonana fankalazana ny faha-45 taonan’ny fifandraisana ara-diplaomatika nisy teo amin’i Madagasikara sy ny Firenena sinoa. 26 avril 2017
Olom-panjakana maro no tonga nanatrika izany ka nahitana ny ambasadaoron’i Shina eto Madagasikara Yang Xiaorong, ny tompon’andraikitry ny Oniversiten’Antananarivo ary ireo olom-panjakana maro izay nifandimby nandray fitenenana.
Nisy tamin’izany ny fanehoana an-tsary ireo fiaraha-miasa teo amin’ny Firenena roa tonta nandritra izay 45 taona izay. Sary manodidina ny 60 teo no naranty tamin’izany.
Araka ny nambaran’ity Masoivoho sinoa eto Madagasikara ity dia mifototra amin’ny sehatra maro ny ity fifandraisana eo amin’ny Firenena roa tonta ity. Ny tena tanjona amin’izany dia ny fanomezana ny tanora malagasy fiofanana mba hampihenana ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara. Fianarana any Shina manodidina ny 100 noho izany no efa natolotr’ity Masoivoho ity ho an’ny tanora malagasy.
Samy naniry ny hitohizan’izany fiaraha-miasa izany avokoa ireo olona nandray fitenenana nandritra izany ity lanonana ity.